Niharan’ny sazy henjana: gadra an-terivozona 10 taona ilay nanolana ankizivavikely | NewsMada
Niharan’ny sazy henjana: gadra an-terivozona 10 taona ilay nanolana ankizivavikely
Efa ankizivavileky roa no niharan’ny herisetra tamin’ny alalan’ny fanolanana vao sarona ity lehilahy iray, tao amin’ny kaominina ambanivohitr’I Mahambo, distrikan’i Fenoarivo Atsinanana. Henjana ny sazy nahazo azy : gadra an-terivozona 10 taona.
Nomelohin’ny fitsarana sazy asa an-terivozona 10 taona an-tranomaizina ny tovolahy mpiandry antsoina hoe i Philibert tompon’antoka tamin’ny fanolanana ankizivavikely roa tao amin’ny fokontany Antsikafoka lalam-pirenena fahadimy kaominina ambanivohitr’i Mahambo, distrikan’i Fenoarivo Atsinanana. Fantatra izany nandritra ny fotoam-pitsarana teo anivon’ny fitsarana ambaratonga ambony misahana ny ady heloka bevava, ny 11 desambra lasa teo araka ny voarakitra ao amin’ny antontan-taratasin’ady laharana faha 240-Toa/19. Voalaza àry fa tombanana teo anelanelan’ny faran’ny volana janoary taona 2019 ka hatramin’ny tapaky ny volana febroary nanatanterahan’ity jiolahy ity ny filàn-dratsiny tamin’i Enimbavy Marcelline, 6 taona sy Claudette 7 taona. Raha ny loharanom-baovao sy ny famakiana ny antontan-taratasin’ady nandritra ny fifandaharana teo amin’ny lapan’ny Fitsarana no nahalalana fa teo am-pilalaovana teo an-tokontany no nalain’i Philibert an-keriny voalohany i Enimbavy Marcelline. Nobatainy ary nentiny tany amin’ny toerana takotanona ilay niharam-boina ka nanamparany ny filàn-dratsiny sy nampiharany herisetra.
Notampenana ny vavany, notaforana ny tongony…
Notampenan’ity jiolahy ity ny lamba ny vavany ary nofatorany ny tanany sy ny tongony ka tsy afa-nikofoka intsony ilay ankizivavikely niharam-boina na dia niezaka niantso vonjy ihany aza. “Norahonany hovonoina aho raha miteny amin’ny olo-maventiko”, araka ny tenin’ilay ankizikely teo amin’ny famakiana ny taratasin’ny famotorana. Niaiky ny heloka vitany i Philibert, saingy niaro tena tamin’ny alalan’ny hoe “misy raha magnano aho ka tsy tompon’ny tenako”. Ny 15 febroary lasa teo vao fantatra ny fisian’ireto ankizikely niharan’ny herisetra sy fanolanana ireto noho ny fitarainana nataon’ny iray voalohany raha sendra natory niaraka tamin-dreniny. Nitantara toy izany koa ilay niharam-boina faharoa. Voaporofo nandritra ny fitiliana tany amin’ny dokotera fa simba tanteraka ireto ankizikely ireto. Taorian’ny fifandaharana, nilatsaka ny didy izay navoakan’ny mpitsara mpamoaka didy ka voaheloka asa an-terivozona 10 taona izy. Aiza ny fiarovana ireny zaza tsy ampy taona iharan’ny herisetra ireny? Azo lazaina fa maivana ihany raha ity sazy ity manoloana ny heloka vitan’ity jiolahy ity. Tokony homena ny sazy faran’izay henjana ny mpanao herisetra sy fihetsika mamoafady amin’ny zaza tsy ampy taona toy izao. Tokony hojerena akaiky ny lalàna mifehy ny zaza tsy ampy taona satria karazan’ny vitavita ho azy ihany ny raharaha toy izao rehefa vita ny sazin’ireo nahavanon-doza ka ahina hanohy ny asa ratsiny indray. Mody hialokaloka amin’ny hoe tsy tompon’ny tenany sy/na entin-javatra? Fomba fiady mba hanamaivanana ny sazy omen’ny fitsarana. Maninona tsy mitady mpivarotra fahafinaretana rehefa teren’ny filàna fa tsy ny ankizikely tsy manan-tsiny no anaovana fihetsika feno habibiana toy izao.